အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ခွေးအစားအစာပါဝင်မှုမှာအနည်းငယ်ကွဲပြားသည်. စည်သွပ်ဘူးနှင့်ခြောက်သွေ့သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာများ၏အခြေခံကွာခြားချက်မှာအစိုဓာတ်ပမာဏဖြစ်သည်. စည်သွပ်ဘူးအစာအကြားပါရှိသည် 70 နှင့် 80% အစိုဓာတ်, ဤယေဘုယျအားဖြင့်လတ်ဆတ်သောအသားထုတ်ကုန်များကနေဖန်ဆင်းတော်ကတည်းက, ခြောက်သွေ့သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထက်မပိုပါရှိသည်နေစဉ် 10%. ခြောက်သွေ့သောအစားအစာများအတွက်အသုံးပြုသောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများတွင်ပြောင်းဖူး gluten အစာပါဝင်သည်, အသားနှင့်အရိုးမုန့်ညက်, တိရိစ္ဆာန်အဆီ, နှင့်အဆီများ. အမဲသားကဲ့သို့သော texture အတွက်, ခြောက်သွေ့သောအစားအစာများကိုပိုမို amylaceous လိုအပ်သည်, သို့မဟုတ်ဓာတ်ပါဝင်ပစ္စည်းများ.
ယေဘုယျအားဖြင့်, နေ့စဉ်အသက်တာမှာခွေးကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏဝယ်လေ့ရှိတယ်၊, အရာလည်းကုန်စည်ခွေးအစားအစာဖြစ်ပါတယ်. ထိုကဲ့သို့သောအာဟာရကုန်ကြမ်းများအများအပြားရောနှောပြီးတော့ extruded ကြောင့်လုပ်သောခွေးအစားအစာပါဝင်ပစ္စည်းများ, ပြီးတော့ခြောက်သွေ့, dehydrated, အရသာ, စသည်တို့ကို, အစိုဓာတ်ကိုထက်နည်းသည် 12%. ခြောက်သွေ့သောခွေးတစ်ကောင်၏အစားအစာသည်အသက်ရှည်ရှည်သိုလှောင်နိုင်သည်, အစာကြေနှင့်စုပ်ယူရန်လွယ်ကူသည်,အဆင်ပြေစွာအစာကျွေး, တတ်နိုင်. ဒါဟာခွေးအစားအစာဈေးကွက်ထဲမှာပိုပိုပြီးလူကြိုက်များလာပြီဖြစ်ပါတယ်.
ပုံမှန်အားဖြင့်ခွေးအစားအစာချမှတ်ခြင်းအဘို့ ,အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းငါတို့ရေးဆွဲရေးရှိသည်: ပရိုတင်းသည် ၃၂ မှ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်၊ အဆီ ၈ မှ ၁၂%၊ ပြာမှုန့် ၆%၊ ဖိုင်ဘာ ၂.၈%၊ ကယ်လစီယမ် ၁.၀%၊ 0.85% အချို့သောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုသင့်ဒေသအခြေအနေနှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်သည် .
အကြမ်းအားဖြင့်ပရိုတိန်းသည်များသောအားဖြင့်ဘ ၀ ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည့်တိရိစ္ဆာန်အစာအများစု၏အဓိကအာရုံစိုက်ရာဖြစ်သည် (i.e. အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ). ခွေးများ, အကောင်းဆုံးအသားစားအဖြစ်တိုက်ကျွေးခဲ့သည်, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များလိုအပ်သည်, အားလုံးသည်ထိုကဲ့သို့သောပဲပုပ်အစာကဲ့သို့သောတစ်ခုတည်းသောအပင် - ပရိုတင်းအရင်းအမြစ်များကိုမှန်ကန်သောချိန်ခွင်လျှာတွင်မတွေ့ပါ။, သို့မဟုတ်ပရိုတိန်း subunits, ဆံပင်တည်ဆောက်ရန်, အရေပြား, လက်သည်း, ကြွက်သားများ, ရွတ်, ရသ, နှင့်အရိုးနု. ၎င်းသည်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်, ကြက်, ငါး, ပြောင်းဖူး gluten နှင့်ပဲပုပ်မုန့်ညက်ကဲ့သို့သောအပင်ပါဝင်ပစ္စည်းများ.
ဘုံဘိုဟိုက်ဒရိတ်ရင်းမြစ်များမှာအပင်များနှင့်အစေ့များဖြစ်သည်. Carbohydrates, ထို့အပြင်ကစီဓါတ်အဖြစ်ခွဲခြား (သကြား) နှင့်အမျှင်, စွမ်းအင်နှင့်အမြောက်အများသည်, အသီးသီး.
ကစီဓါတ်များသည်သကြားအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, ထိုကဲ့သို့သောဂလူးကို့စသို့မဟုတ် fructose အဖြစ်. အစာခြေမှတဆင့်, ခွေးများသည်သကြားကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ခွေးရဲ့အူအတွင်းရှိဘက်တီးရီးယားများကဖိုင်ဘာသည်အချဉ်ပေါက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြိုခွဲခြင်းသို့မဟုတ်ချည်မျှင်အဆီအက်ဆစ်များထဲသို့ကျစေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်. မြင့်မားသောကစော်ဖောက်နိုင်သောဖိုင်ဘာအရင်းအမြစ်များ, ထိုကဲ့သို့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်သွားဖုံးအဖြစ်, တိုတောင်းသောကွင်းဆက်ဖက်တီးအက်ဆစ်ပမာဏကိုပေး. အတန်အသင့်အချဉ်ဖောက်အမျှင်, ထိုကဲ့သို့သော beet ပျော့ဖတ်အဖြစ်, စွန့်ပစ်ပစ္စည်းရွေ့လျားမှုအတွက်ကွင်းဆက်အတိုအက်ဆစ်နှင့်အမြောက်အများပံ့ပိုးပေးပါ. အနည်းငယ် fermentable အမျှင်, ထိုကဲ့သို့သော cellulose အဖြစ်, အဓိကအားဖြင့်အစာခြေလမ်းကြောင်းမှတဆင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများရွေ့လျားခြင်းနှင့်အတိုချည်မျှင် fatty acids အချို့ကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးသည်.
အဆီများသည်အရေးကြီးသောအဆီခွဲများဖြစ်သည်, Omega-6 နှင့် Omega-3 fatty acids. Omega-6 fatty acids သည်အရေပြားနှင့်အင်္ကျီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောအမြှေးပါးဖွဲ့စည်းမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. Omega-3 fatty acids သည်သွေးခဲခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေခြင်းတွင်အရေးကြီးကြောင်းပြသခဲ့သည်။. အဆီလည်းခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်, ရောင်ရမ်းခြင်းကိုထိန်းချုပ်, နှင့်ပိုပြီး. အဆီသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသိုလှောင်ထားသောအဓိကစွမ်းအင်ဖြစ်သည်, အသားများတွင်တွေ့ရသောဘိုဟိုက်ဒရိတ် (သို့) ပရိုတင်းများထက်စွမ်းအင်နှစ်ဆပိုများစေသည်, ကြက်, ငါး, နှင့်အပင်အဆီများ, ထိုကဲ့သို့သောပိုက်ဆန်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီအဖြစ်.
အရိုးကြီးထွားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဗီတာမင်များသည်တာဝန်ရှိသည်, သွေးခဲခြင်း, စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု, နှင့် oxidant ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး.
ဗီတာမင်အေ, : D, အီး, နှင့် K သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့စုပ်ယူရန်အဆီလိုအပ်သည်, B-complex ဗီတာမင်နှင့်ဗီတာမင်စီစသည့်ဗီတာမင်များသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ရေစုပ်ယူရန်လိုအပ်သည်.
ခွေးများသည်ခါးသောအရာများကိုမြည်းစမ်းနိုင်သည်, ငန်, ချိုမြိန်, နှင့်အချဉ်. တစ်ခုခုကခွေးကိုကောင်းကောင်းအနံ့ခံမယ်ဆိုရင်, ကပေါက်ကိုဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်. စုံတွဲတစ်တွဲကိုက်ပြီးနောက်, အရောင်သို့မဟုတ်အရသာအခန်းကဏ္ play မှပါလိမ့်မယ်, too.so ခွေးအစားအစာစက်ရုံသည်များသောအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောခွေးများကိုဆွဲဆောင်ရန်အတွက်ခွေး၏အရသာကိုအရသာအမျိုးမျိုးကွဲပြားသည်.